Basenalo ithemba ngokuthula abahlali baseGlebe – Ubukhosi
Home/ Izindaba/Basenalo ithemba ngokuthula abahlali baseGlebe
Ihositela lezidubedube iGlebelands abahlali bakhona bathi banethemba lokuthi kuyobuya ukuthula
ABALILAHLILE ithemba ngokuphela kokuqothwa kwabantu isinyelela abahlali basehositela iGlebelands eMlaza njengoba phambilini bathi bebesaba ukudlulisela ulwazi emaphoyiseni ngoba phakathi kwawo kukhona ayishaya emuva ayishaye phambili.
Ukuboshwa komunye umsolwa othathwa njengongqondongqondo ezigamekweni zokusocongwa kwabahlali ngoLwesibili kubaqinise idolo.
ElaboHlanga likhulume noMnu uMjabuliseni Kweyama ohlale kuleli hositela iminyaka engama-20 waze waphuma kulo ngowezi-2016 esabela ukuphepha kwakhe.
UKweyama uthi kuyabajabulisa ukuboshwa kwabasolwa, kodwa amaphoyisa abonakala engalwenzi ngendlela uphenyo lwawo ngoba uma sekukhona ubhongoza oyedwa osebanjiwe ubona kulula nokuthi nabanye balandele.
“Ngangihleli kahle eGlebe iminyaka eminingi, ngikwazi nokonga imali ngiyithumele ekhaya ngaphoxwa yizona izibhelu zokubulawa kwabantu,” kuzikhalela uKweyama.
Uthi okwamsusa phansi kwaba ukuqala kokubulawa kwabesifazane, kwacaca ukuthi sekwedlulele kwelinye izinga.
“Inzima impilo manje ngoba umuntu usehamba eqasha ezindaweni zabantu, kuyabiza nokugibela siye ematohweni futhi kulezi zindawo siyantshontshelwa.”
UKweyama uthi akukho okuyombuyisela eGlebe noma kungathiwa sekutshalwe amasosha ahlala ngaphakathi ubusuku nemini. Umsolwa oboshwe ngoLwesibili uneminyaka yobudala engama-38, kanti uthinteka esigamekweni sokubulawa kukaFezeka Njiyelo ngowezi-2016.
UNjiyelo wangenelwa ngabantu kuleli hositela bamdubula washonela khona lapho.
Lo msolwa uzophinde abhekane namanye amacala amabili okubulala uMnu uWilliam Mthembu noMnu uThokozani Machi ngowezi-2015 enxanxatheleni yezitolo eClairwood.
Kusolwa ukuthi abafi babelandelwa futhi besohlwini lwabantu ababesocongwa kuleli hositela.
Ngesikhathi elaboHlanga lihambele kuleli hositela ngempelasonto edlule komunye umcimbi, abanye elikhulume nabo bathe isimo siya ngokuba ngcono kodwa awukwazi ukulala ukhululeke. Insizwa enebhizinisi elidayisa inyama yangaphakathi neziphuzo ezibandayo eduze kwehositela ithe ubugebengu obenzeka egameni lehositela bukhinyabeze kakhulu umsebenzi wabo. Ithi noma umnyombo walokhu bengawazi, kodwa sekunomxhantela wobugebengu. Wenze isibonelo ngokuthi ukubulawa kukaNkk uSibongile Mtshali ngoNtulikazi wezi-2017 kwakuyisenzo sobugebengu ngoba wangenelwa esesitolo sakhe kwathathwa nemali. Kulesi sigameko kwaboshwa uKhayelihle Mbuthuma owayaziwa ngelika“Mroza” oneminyaka yobudala engama-28. UMbuthuma ugwetshwe udilikajele ngoMbasa eNkantolo Yesifunda eThekwini. Phakathi kwasebeboshwe ngezehlakalo zaseGlebelands kukhona nephoyisa uSayitsheni uBhekukwazi Mdweshu osebenzela obesebenzela esiteshini iDurban Central owatholwa nempahla okusolwa ukuthi yayisetshenziswa kwezinye izigameko.
Yize isimo sishubile kuleli hositela, kodwa abantu bayabonakala bephuma bengena kodwa ngesikhathi santambama kuyaqala ukucweba nomsindo wokukhala phezulu kwemisakazo ovamise ezindaweni ezinjangelezi awuzwakali. UKhomishana osabambile Wamaphoyisa KwaZulu-Natal uMajor General uBheki Langa uqinise idolo umphakathi waseGlebelands ethi bazokwenza isiqiniseko sokuthi abatholwa benamacala bavalelwa ejele. ULanga ubonge amaphoyisa ngokusebenza ngokungakhathali ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu baphephile.